ကျွန်တော်တို့ Successmore Being Yangon Trading Co.,ltd သည် ............... ဥပဒေနှင့်အညီ မျှတပြီး တည်တန့်ခိုင်မြဲစွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် စစ်ဆေးမှုများစွာလုပ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ အကောင်းဆုံးသော အရည်အသွေးရှိသည့် ကုန်ပစ္စည်းများဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အကန့်သတ်မဲ့ပြီးလုပ်နိုင်သလောက် ဝင်ငွေပြန်လည်ရရှိနိုင်ပြီး Successmore Member များမှယုံကြည်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သည့်အပြင် ယခုခေတ်တွင် အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုပေးနိုင်သည့် Cycle Matching Business Plan ဖြင့်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီမှ လူအများအပေါ် အောင်မြင်သော စီးပွားရေးသမား များဖြစ်လာစေရန်အတွက် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားများတည် ဆောက်ပေးခြင်း ၊ ပန်းတိုင်သို့ရောက်အောင် ပို့ပေးခြင်း ၊ ဝင်ငွေစီးကြောင်းများတည်ဆောက်ပေးခြင်း ၊ ကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးကို ရရှိစေခြင်းများကို ချမှတ်ပေးထားသော လမ်းစဉ်များအတိုင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ရရှိစေပါသည်။ လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများမှာ သင်ယူ ၊ လက်တွေ့လုပ်ဆောင် ၊ တိုးတက်ကြီးပွားပြီး အောင်မြင်မှုများကို အတူတကွ ဂုဏ်ပြုမျှဝေခြင်းများပင် ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီရုံးချုပ်မှာ ..................... တွင်တည်ရှိပါသည်။
အောင်မြင်မှု ၊ ပျော်ရွှင်မှု နှင့် မိမိ၏ဘဝပန်းတိုင်ကို အရောက်လှမ်းနိုင်ခြင်းတို့ကို တည်ဆောက်ပေးသော Network ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်စေရန်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ အောက်ပါ တန်ဖိုး ၇ ချက်ကို တန်ဖိုးထားခြင်းဖြင့် အတူတကွလက်တွဲသွားမည့် ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
1. သစ္စာရှိခြင်းဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်း
2. ရင်ဖွင့်၍လက်ခံပေးခြင်းနှင့် လူအများအပေါ်လေးစားသမှုရှိခြင်း
3. မေတ္တာထားခြင်းနှင့် မိမိအလုပ်ပေါ်မှာပျော်ရွှင်စွာလုပ်ကိုင်ခြင်း
4. သင်ယူခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း
5. ရေရှည်အောင်မြင်မှုအတွက်မိမိကိုယ်ကို မြှင့်တင်ခြင်း
6. ရိုးရှင်းပြီး မရှုပ်ထွေးခြင်း
7. မိမိ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်အပေါ်အလေးထားရင်းနှင့် ပျော်ရွှင်မှုရှိခြင်း
လူအများထက်ပိုသာသော ဘဝတွေကိုသာနှစ်သက်သော Successmore စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သူများအားလုံးကို အကန့်အသတ်မဲ့သော စီးပွားရေးကမ္ဘာမှကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ အခုချိန်မှစ၍ လူကြီးမင်းသည် Successmore ၏ စီးပွားရေး ရှယ်ရာဝင်တစ်ယောက်အဖြစ်သို့လှမ်းလျှောက်ရတော့မှာဖြစ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲပေးနိုင် သောအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင် မိမိမျှော်လင့်ထားသည်ထက်ပိုပြီး အောင်မြင်အောင်လုပ်ပိုင်နိုင်မည့် အဖိုးတန်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းအတွက် ၊ ငွေကြေးအတွက်၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ၊ မိသားစုအတွက်အပြင် ဂုဏ်ပြုဆုများအတွက်ပါ အဘက်ဘက်မှပြည့်စုံအောင် မိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားနိုင်ပါသည်။
စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် သင်ယူခြင်းများကိုပေးစွမ်းနိုင်သော သတ်မှတ်တည်ဆောက်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှု အောက်တွင် မိမိတွင်ရှိနေပြီးသားဖြစ်သော မိမိ၏ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စ၏ အတိုင်းအတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စတွေကို မြှင့်တင်ရင်း မိမိကိုယ်စွမ်းကိုယ်စအပြင် လူအများ၏ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စ များကိုပါ ကျွမ်းကျင်စွာထုတ်သုံးနိုင်လာပြီး Successmore စီးပွားရေးတွင် ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်သည့်အပြင် အောင်မြင်ပြီး လူအများ၏ စံပြပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပြီး မိမိနှင့်အတူ လူအများကိုပါ တစ်ပြိုင်နက်ထဲအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သောသူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမည့်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာများဟာလဲ လူကြီးမင်းကို ကြီးမြတ်သူတို့တွင် ရှိသောတန်ဖိုးတို့ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်စေသည့်အပြင် မိမိ၏ဘဝတွင် ပျော်ရွှင်စွာနှင့် ကမ္ဘာကြီးကိုပိုမိုလှပအောင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိသည့်လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီ၏အောင်မြင်မှုနှင့် နာမည်ကောင်းရမှုများသည် ကုမ္ပဏီနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သူတို့၏ စိတ်ဝင်တစားနှင့် မှန်ကန်သော နည်းလမ်းများဖြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းများကြောင့်သာ ရရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုရရှိလာသော အရာများဟာ ရေရှည်တည်တန့်ခိုင်မြဲသော အောင်မြင်မှုရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းနှင့် အတူတစ်ခရီးတည်းကို အတူသွားရတာကို ကျွန်တော်တို့ဘက်မှ အောင်မြင်မှုလမ်းမပေါ်မှာ အတူလျှောက်လှမ်း နေရခြင်းလို့ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အတူတွဲနေရတဲ့ဘဝမှာဆိုရင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ သင်ယူခြင်း၊ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်း၊ မျှဝေခြင်းနှင့် သမိုင်းမှတ်တိုင်သစ်တစ်ခုတည် ဆောက်ခြင်းတို့ဖြင့်လျှောက်လှမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့ကတိပြုပါတယ်။ လူကြီးမင်း၏ဘဝကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်သော စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေကိုလဲပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ လက်ရှိဖြစ်တည်နေတဲ့ လူကြီးမင်းထက် ပိုကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
2019 ခုနှစ် ရေရှည်တည်တန့်ခိုင်မြဲသော အောင်မြင်မှုကို တည်ဆောက်ရန်နည်းဗျူဟာ
ရေရှည်တည်တန့်ခိုင်မြဲသော အောင်မြင်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုတည်ဆောက်ပါ။
မျှော်မှန်းထားသောအရာများ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်သော နည်းစနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ပါ။
နေရာ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းအတွက် တိုးတက်အောင်လေးလေးနက်နက်မြှင့်တင်ပါ။